အဆိပ်ရှိတဲ့ အပင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အဆိပ်ရှိတဲ့ အပင်
Posted by ဆူး on Oct 19, 2010 in News | 11 comments
ဒီအပင်ကိုအိမ်တွေ၊ရုံးတွေဟော်တယ်….နေရာတော်တော်များများမှာတွေ့ဖူးကြမှာပါ။နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲလို့ကျွန်တော်လည်းအတိအကျနာမည် မသိဘူး (ကျွန်တော့်စိတ်ထင်
ဂမုန်းထင်တယ်) တွေ့ဖူးတာတော့ တွေ့ဖူးတယ်။ တကယ်တော့ ဒီအပင်ဟာ အရမ်းကို အန္တရာယ် ရှိတဲ့အပင်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ခလေးတွေအတွက် စိုးရိမ်စရာပါ။
၄င်းအပင်ရဲ့ အစေး ဟာ အလွန်အဆိပ်ပြင်းပြီး ခလေးများ ကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ သေဆုံးစေနိုင်သလို့ အရွယ်ရောက် လူကြီးဆိုရင်လည်း ၁၅ မိနစ်အတွင်းမှာ သေစေနိုင်လောက်အောင်
အဆိပ်ပြင်းပါတယ်။ မျက်စိထဲဝင်လို့ကတော့လည်း ထာဝရ မျက်စိကွယ်သွားစေပါတယ်။ မသိသေးတဲ့ သင့်မိတ်ဆွေတွေကို တော့ လက်တို့အသိပေးစေလိုပါတယ်။
မေးထဲက နေရတာပါ။ ဘယ်သူမှ တင်တာမတွေ့သေးလို့ တင်လိုက်ပါတယ်။
ဒီသတင်းကို ခုမှသိတာ … ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော် မမဆူး
ဟီး ဟီး….. ကျေး ဇူး တင် ပါ တယ် .. အ မ လဲ အ ဆိပ် ရှိ လား ဟင် .. မ ဆူး ဆို တော. …
အတော်ဘဲလောကကြီးကိုစိတ်ကုန်လာရင် ဒီအပင်ရှာပြီး အစေးကိုစားလိုက်မယ်။
တူဟာတူ တတ်တေချင်တာ ဆူးကို လာ မဆွဲထည့်နဲ့နော်.. ဖန်ခါးသီး ၅၀၀ အမှု နဲ့ ဆူးနဲ့ လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါ.. (ဖြူဖြူကျော်သိန်း သီချင်းမဟုတ်ဘူးနော်)
( ပို့စ်တွေတင်တဲ့ ဆူးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ ဒါမှမြန်မာတွေအမှန်သိရတာပေါ့နော..။)
အဲဒီအပင်နာမယ်က Dieffenbachia တဲ့..။ အဆိပ်တော့ရှိတယ်..လူသေလောက်အောင်မပြင်းပါ။
Dieffenbachia is indeed poisonous if ingested, but this warning email is exaggerated and inaccurate
This emailed warning, which containsaphotograph ofapotted house plant, claims that the plant is so poisonous that death can occur very rapidly – in less thanaminute for children and in 15 minutes for adults. And, according to the message, simply touching the plant and then rubbing your eyes can cause partial or permanent blindness. The plant species shown in the photograph is not identified in the warning message.
The plant depicted in the photograph is in factadieffenbachia,aspecies commonly used asapotted house plant because of its attractive appearance and its suitability for indoor, low light intensity growing environments. Dieffenbachia is indeed poisonous to humans and animals if parts of the plant are ingested. Dieffenbachia is also known as “Dumb Cane” because of the toxic effect it can have on the mouth and tongue if chewed.
However, this warning quite significantly exaggerates the risk of death associated with dieffenbachia poisoning. The results of dieffenbachia poisoning are normally not life threatening and victims usually makeafull recovery. Given that eating the plant may potentially cause swelling severe enough to block the victim’s airways, death isapossible result. However, research indicates that actual fatalities in humans are extremely rare. Certainly, there are no credible medical reports that back up the suggestion in the warning message that death isacommon and very rapid result of dieffenbachia poisoning. An article discussing caladium, dieffenbachia, and philodendron plant poisoning published on the Emedicine website notes:
* Burning in mouth or throat
* Damage to cornea of the eye
* Swelling in mouth or tongue
Given that it is actually quite important that householders are aware that their dieffenbachia plants are potentially poisonous, especially if they are parents or guardians of younger children or have pets, the email does have some merit asawarning. Unfortunately, the email significantly erodes its potential usefulness asacautionary tale by so blatantly misrepresenting the potential danger of the plant. Another quite serious flaw in the warning message is that it does not actually include the name of the plant under discussion. Some versions do not even include the image of the plant – which incidentally was apparently “borrowed” from the Lahore Nursery website for use in the message – thus rendering the warning virtually useless.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အများအတွက် ကျွန်တော့် ဆိုဒ်မှာ တင်ပေးဖို့ ယူသွားလိုက်ပါတယ်
တခါမှ မကြားဖူးတာတော့ အမှန်ပါပဲဗျာ … ယုံ၇ခက်ခက် ဖြစ်နေတယ်ဗျ… ဒါပေမဲ့အခုလိုပြောပြပေးတဲ့အတွတ် ကျေးဇူးပါဗျာ
ကိုပေါက် ပြောတာကို သဘောကျတယ်။နောက်
တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီဂမုန်းပင်တွေကရပ်ကွက်ထဲကအိမ်တော်တော်များများမှာရှိတယ်။ ဒီလိုစာမျိုး များများတင်ပေးပါနော်။
မေးလ်တွေထဲမှာ ခြိမ်းခြောက်တာတွေက ယုံကြည်မိတဲ့လူတွေအဖို့တော့ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်နော်… တစ်ချို့ကလည်း နောက်ပြောင်ပြီးတော့ တင်လိုက်တာပဲ… ဖတ်မိတဲ့သူက တကယ်ထင်မိရင် မလိုလားအပ်တဲ့ ပြသနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တာပဲလေ… အခုလိုဖော်ပြပေးတဲ့အတွက်ရော အမှန်ကို ရေးသားတင်ပြပေးတဲ့အတွက်ရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…